गो टाढा अभिलेखागारको नजिक रहनुहोस् »होज विश्वविद्यालय
ट्याग: गो टाढा टाढा रहनुहोस्
होज इल्युमिनसले नेपल्स चेम्बर अध्यक्षको पुरस्कार प्राप्त गरे
बधाई छ, डेभ वेस्टन! होज्स इल्युमुनसले नेपल्स चेम्बर अध्यक्षको पुरस्कार प्राप्त नेपल्स लाम्बर एन्ड सप्लाईका प्रमुख परिचालक अधिकारी डेभ वेस्टनले २०१ 2019 को नेपल्स चेम्बर अध्यक्षको पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। वेस्टनलाई समुदायको भलाइप्रति उसको समर्पण र चेम्बरको निरन्तर समर्थनको लागि सम्मानित भइरहेको छ। ऊ चेम्बरमा मान्यता प्राप्त हुनेछ [...]	थप पढ्नुहोस्
उच्च शिक्षा र कार्यबल बीचको लिंक
शैक्षिक, परिसर जीवन
द्वारा लिखित: डा। जोन मेयर, राष्ट्रपति, होज्स युनिभर्सिटीको छ डिग्री डिग्री छुटको साथ, तपाईं सम्भावित जडानहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। उच्च शिक्षा र कार्यबल बीचको लिंक सीधा छ। होजज युनिभर्सिटीमा हामी शिक्षा र पेशेवर सीप प्राप्ति बीचको लि understand्क बुझ्छौं र हाम्रो डिग्री र प्रमाणपत्रहरू विशेष रूपमा हाम्रो कार्यशक्तिको आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि डिजाइन गरेका छौं [...]	थप पढ्नुहोस्
हामी हाम्रो २०१ Nurs नर्सहरू प्रस्तुत गर्न गर्व गर्दछौं!
हाम्रो २०१ Nurs नर्सहरूलाई बधाई छ! मे १०, २०१ 2019 मा होज्स विश्वविद्यालयले यस बर्षको स्नातक नर्सहरूको लागि पिनिंग समारोह आयोजना गर्न पाउँदा गर्व छ। नर्स हप्ता मनाउने कस्तो शानदार तरिका! हाम्रो पिनिning समारोह हाम्रा नर्सहरूको लागि विशेष समय हो र 10 सत्र अर्को अपवाद घटना थियो। प्रत्येक नर्सले पुग्न कडा मेहनत गरे [...]	थप पढ्नुहोस्
बधाई छ EMS विद्यार्थीहरु
होज्स EMS विद्यार्थीहरूले पहिलो स्थान लिए! यस पछाडिको हप्ताको अन्तमा हजस युनिभर्सिटी इमरजेन्सी मेडिकल सर्विसेज कार्यक्रमका विद्यार्थीहरूले लेक वर्थ, एफएलएको छैठौं वार्षिक पेन्थर ईएमएस चुनौतीमा प्रतिस्पर्धा गरे। पाम बीच स्टेट कलेजले आयोजना गरेको हो। राज्य भरका टोलीहरूलाई विभिन्न आपतकालीन परिदृश्यहरूमा न्याय गरियो। १ teams टोलीहरूमध्ये []	थप पढ्नुहोस्